शरणार्थी शिविरबाट उदाएका विश्वका नम्बर... :: भानुभक्त :: Setopati
भानुभक्त काठमाडौं, असोज १७
अफगानिस्तान भनेपछि धेरैका दिमागमा गृहयुद्ध, आत्मघाती हमला, तबाही र तालिबानको तस्बिर आउँछ। तर बिस्तारै अब यो तस्बिर धुमिल हुन थालेको छ। गृहयुद्धको दलदलमा फसेको अफगानिस्तानले विश्व क्रिकेटमा आफ्नो नयाँ तस्बिर कोरिरहेको छ।
यो नयाँ तस्बिरका महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनेका छन्-२० वर्षीय सुपरस्टार रसिद खान। जसलाई यही साता आइसिसीले एकदिवसीय बरियतामा पहिलो नम्बरका अलराउन्डर घोषणा गरेको छ।
सन् १९९५ मा पहिलो पटक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड गठन भयो। तर एक वर्षपछि सत्तामा आएको तालिबानले क्रिकेटमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। तालिबानको तर्क थियो-क्रिकेटले धर्मबाट ध्यान हटाउँछ।
रसिद पढाइमा तेज थिए। बुवाआमाको इच्छा थियो- छोरो डाक्टर बनोस्।
‘म फर्स्ट त हुन्थेन तर टप फाइभमा पर्थें। पढाएको छिटो बुझ्थें। अम्मी भन्थिन्-तिमी डाक्टर बन्नुपर्छ। मैले नि डाक्टरै बन्ने सोचेको थिएँ। किनकी हाम्रो परिवारमा कोही डाक्टर थिएनन्,’ रसिदले भनेका छन्, ‘क्रिकेटर हुने मेरो लक्ष्य थिएन किनकी त्यतिबेला अफगानिस्तानमा क्रिकेटको कुनै भविष्य देखिन्नथ्यो।’
क्रिकबजका हर्ष भोग्लेले एक अन्तर्वार्तामा रसिदलाई सोधे- मैले साहिद अफ्रिदीसँग पनि हात मिलाएको छु। उनकोजस्तै तपाईंको हात पनि निकै कडा र बलियो छ नि, किन?
जवाफमा बाल्यकाल सम्झिँदै रसिदले भने- हामी दुबै पठान हौं। बच्चैदेखि दाइ र बुवासँग खेतमा काम गरेका छौं। जीवनमा धेरै दु:खकष्ट झेलेका छौं। त्यही भएर हाम्रा हात कडा र बलिया छन्।
‘मलाई यता जा। उता जा। बल लिएर आइजा भन्थे। त्यतिबेला मलाई लाग्थ्यो-यो कस्तो रमाइलो खेल रैछ,’ रसिदले भनेका छन्, ‘सुरूमा मलाई बलिङभन्दा ब्याटिङमा खुब रूची थियो।’
कुची ट्राइब टिमबाट डोमेस्टिक क्रिकेट खेल्ने उनी सुरूमा ओपनिङ ब्याट्सम्यान थिए। १/२ ओभरमात्र बलिङ गर्थे।
एकदिन उनका कप्तानले भनेछन्- तिमी त ब्याटिङभन्दा बलिङ राम्रो गर्छौं। उनले रसिदको बलिङको प्रशंसामात्र गरेनन्। बलिङमात्र गरोस् भनेर ८/९ नम्बरमा आउने ब्याट्सम्यान बनाइदिए छन्।
सन् २००५ मा अफगानिस्तान एसिसी यु-१५ कपको फाइनलमा पुग्यो। आबुधावीमा भएको फाइनलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई ६ विकेटले हराएर उपाधि चुमेको थियो।
सन् २००७ मा अफगानिस्तान एसिसी यू-१९ एलिट कपको फाइनलमा पुग्यो। सो फाइनलमा पनि नेपालले अफगानिस्तानविरूद्ध ४८ रनको जित निकाल्दै उपाधि चुम्यो।
सन् २०१५ मा अन्डर-१९ विश्वकप खेल्ने नयाँ प्रतिभा खोज्ने क्रममा प्रशिक्षकका आँखा रसिदमाथि परेका हुन्।
प्रशिक्षक दौलत अहमदजाईले उनलाई भनेका थिए- यदि तिमीले तीन महिना मेहनत गरेर खेल्यौ भने महान क्रिकेटर बन्नेछौ। रसिद यू-१९ टोलीमा परे। दौलतको कुरा सम्झिरहे र त्यहीअनुसार मेहनत पनि गरे। नभन्दै उनी त्यही वर्ष राष्ट्रिय टोलीमा परे।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) खेल्ने उनी पहिलो अफगानी खेलाडी हुन्।
‘आइपिएल खेल्न पहिलोपल्ट मैदानमा उत्रिँदा म कहाँ छु भन्नेमा मलाई नै विश्वास लागेन। एक वर्षमै राष्ट्रिय टिम, अर्को वर्ष यत्रो ठूलो आइपिएलमा? यो कसरी भयो?’ रसिदले एक युट्युब अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
आइपिएलमा विराट कोहलीलाई आउट पार्दा निकै मजा आउने उनी बताउँछन्। विकेट लिएपछि रसिद दुबै हात फैलाएर 'एरोप्लेन सेलिब्रेसन' गर्छन्। यो शैली उनका भतिजाले सुझाएका हुन्।
बिग ब्यासमा उनको प्रदर्शनपछि अफगानिस्तानका पूर्वप्रशिक्षकसमेत रहेका अष्ट्रेलियाका पूर्वटेस्ट क्रिकेटर डिन जोन्सले सिड्नी मोर्निङ हेराल्डमा लेखे- रसिद खान पूर्ण रूपमा अर्कै तहका खेलाडी हुन्। अहिलेका कुनै पनि ब्याट्सम्यानले उनी कतातिर बल घुमाइरहेका छन् भन्ने मेसो पाउँदैनन्। उनी ९२-९७ किलोमिटर/प्रतिघन्टाको गतिमा बल फाल्छन् यसले कुनै पनि ब्याट्सम्यानलाई अगाडि बढेर उनको बलमा प्रहार गर्न असम्भवजस्तै हुन्छ। उनी यस्ता छन् कि जुनसुकै टिमबाट खेले पनि सबैलाई आफूतिरै सम्मोहित गरिदिन्छन्। मैले कुनै ब्याट्सम्यान देखेको छैन। जसले उनलाई चुटेका छन्। बिबिएलमा उनको क्षमता देखेपछि मैले कल्पना गरें- उनीजस्तो क्षमता भएको खेलाडीले अष्ट्रेलियन टिममा कति धेरै सुधार गर्थे होलान्।’
विश्व क्रिकेटमा चमत्कार गरेका रसिदले यस्तो बलिङ गर्न कसैबाट सिके कि?
‘म अहिलेसम्म जसरी बलिङ गरिरहेको छु। सुरूदेखि यसरी नै गर्थें। कुनै कोचले मलाई यसरी गर, त्यसरी गर भनेका छैनन्,’ रसिद भन्छन्, ‘आइपिएलमा हुँदा मैले मुरलीधरनलाई पनि सोधें-मेरो बलिङबारे तपाईं के सोच्नुहुन्छ? म के गरूँ, के नगरूँ?'
मुरलीधरनले भनेछन्- रसिद, यु आर युनिक। तिमी मभन्दा पनि राम्रो बलर हौ। तिमीसँगको क्षमता विशेष छ।
‘धेरै सपना त पूरा भइसके। अब एउटै सपना बाँकी छ। त्यो हो, अफगानिस्तानका लागि विश्वकप जित्ने,’ रसिदले भनेका छन्, ‘मेहनत गरेर मनैदेखि खेल्यौं भने मलाई लाग्छ- त्यो दिन पनि धेरै टाढा छैन।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १७, २०७५, ०७:२५:००